Ogaden News Agency (ONA) – OYSU Minnesota oo gaba gabaysay Habeenkii Ogaden Night.
OYSU Minnesota oo gaba gabaysay Habeenkii Ogaden Night.
Posted by wariye5	/ May 9, 2011
Ururka dhalinyarada Ogaden Youth Students & Union Ee Gobolka Minnesota oo mudoyinkii lasoo dhaafay ku hawlanaa abaabul aad u balaadhan, kaasoo ay la wadaagayeen shacabka kasoo jeeda Ogadenia. Abaabulkan oo ka bilowday magaalooyinka Mataanaha (Twin cities) bishii ina dhaaftay ee March 5teedi, ayaa dhalinta OYSU ee gobolka Minnesota ay oogu magac dareen Habeenkii Ogadenia.
Waxaa kale oo ay dhalintu si wada jir ah u wajaheen Dagmooyinka uu ka koobanyahay Gobolka Minnesota dhamaantii, Iyagoo soo wada maray Dagmooyinka, Faribault, St cloud, Rochester & Willmer oo ahayd midi lagu soo gaba gabeyay Bandhig faneedkan Habeen hore. Halkaas oo ay dhalinta Ogadenia ee gobolka Minnesota ka muujiyeen wacdaro aan lasoo koobi Karin lana wadaagen shacabka xaqiiqda dhabta ah ee kajirta gayigooda hooyo. Halkaas oo ay kusoo ban dhigeen dhaantooyin casri ah, Majaajilooyin dadka aad ooga qosliyay & Fanaaniinta dhalinta OYSU ee Minnesota oo kusoo ban dhigay heeso wadaninimo & qiiro ku dheehantahay.
Dhalinyarada kasoo jeeda Ogadenia ayaa mudooyinkan ku hawlan sidii ay garab buuxa usiin lahaayeen Shacabka dulman ee gayigooda uu gawriiro Guumaysiga maxaysatada aha ee Ethiopia. Una guntaday inay meel oogasoo wada jeedsadaan guumaysigan guunka ee garaad xumada ku xasuuqaya Goboladii ay udhasheen. Dhalinta oo ay markasta wehelinayeen Maamulka Jaaliyada Ogadenia ee gobolka Minnesota ayaa wacdaro kasoo muujiyay Goobihii ay tageen midaasoo ay kasoo qayb galeen boqolaalan reer Ogadenia & Jamhuuriyada Somaliya ee kunoolaa goobaha ay dhalintu kasoo jeedinayeen Bandhig faneedkan ay oogu magac dareen “Habeenkii Ogadenia”.
Ururka dhalinyarada ayaa soo gaba gabeeyay hawlihii ay kawadeen dhamaanba gobolka Minnesota haatana uwajahan wadada dheer ee mustaq bal iyagoo soo bandhihigi doona Riwaayad aad ubalaadhan oo loogu magac daray “Gadoodkii Dhacabka & Gurmadkii Halganka” Bilaha soo socda hadii alle idmo. Iskusoo duuboo ururka Dhalinyarada OYSU ee caalamka ayaa ku hawlan sidii ay oogasoo bixi lahaayeen doorka ay ku leeyihiin Halganka xaqa aha ee Ciidanka JWXO kula jiraan Maxaysatada Guumaysiga.
Xornimooy Maxaa tahay?
Xaalkaagu suu yahay?
Xaq Maxaan uleenooy?
ogaden boy says:
asc. waxa aan leeyahay waad dadaalaysaan dhalinta ogadenya ee minnesota waxa aad mudantihiin abaal marin waxa aadna u dadaasheen waa dalkeena ee marna ha ka daalina danaha umadeena si aan ku gaadhno hormar waara oo aan ku naaloono si aan ula mid noqono bulshada caalamka ee xoriyada haysata waxa aan leeyahay dharbaaxada gumaysiga yaan ka dhiidhiyeeynoo dhagar qabe wayaanuhu dhabarkiisa rarayaa waxa aad tihiin geesiyaal halgamayaal ah oo baal dahab ah kaga jira taariikhda umadan dulman waxa aan halkan uga jeedaa rooble ina adeer waxa aan ku leeyahay waxa aad tahay halgame aan marna la gaban waxa auu aaminsanyahay adoo da yar ayaad ka dhex muuqataa halganka umada dhamaan dhalinta ogadenya mel kasta oo ay joogtaba waan salaamayaa
Maashaa alaah dhalinta minnesota dadaal adag ayay kujiraan walaahi allaha ha idin garab galo
khayr allaah ha siiyo dhalinta OYSU waxay wadaan dadaal xoogan oo xorriyadda soo dadjinhaya insha allaah,
GUULAYSTA , SII GIIJIYA……………